Dian’ny lehiben’ny Governemanta Malagasy taty Toamasina
Hovitaina alohan’ny fidirana ny asa fanadiovana ny CAMPUS, antso avo avy amin'ny lehiben'ny Governemanta mahakasika ny fividianana noty sy kolikoly misy ao Barikadimy
Taoriana ny fanesorana ireo mpianatra tao barikadimy dia tonga nijery ny zava-misy tao anaty campus ny lehiben’ny gouvernemanta AtoaKOLO Roger, ny alakamisy faha 25 septambra 2014 lasa teo. Tonga nanotrona tamin’izany ireo minisitra 5 mianadahy sy ry zareo avy amin’ny mpandraraha ao amin’ny oniversite izay notarihan’ny filohan’ny oniversite Atoa VELO Jerom.
Gaga ny praiminisitra raha nahita ny zava-misy tao barikadimy ny toamasina satria korontana loto maro samy hafa no hita tamin’ny fandalovana teny an-toerana, ankoatra ireo dia soratra maro samy hafa ihany koa no hita toin’ny manao photocopie, CASINO ireo no tazana amin’ny rindrina sy ny hefitrano fipetrahan’ny mpianatra.
Nilaza anefa ny lehibeny gouvernemanta fa tsy mendrika hoan’ny ireo mpianatra manovo fahalala ato barikadimy izao zava-misy izao fa ho ezahina ny hanatsarana hatrany ity oniversite ny Toamasina ity.
Araka ny fantatra mantsy dia 25% ny mpianatra ihany no zakan’ny trano fonenanin’ny mpianatra Barikadimy.
Etsy ankilany anefa dia maro amin’ireo mpianatra nipetraka tao amin’ny oniversiten’ny Toamasina efa miasa ary tsy mianatra intsony ka izany no isany antony nahatonga ny fanasorana ireo mpianatra.
Taorian’ny fitsidihana tao tamin’ny oniversite barikadimy dia nanao lohabary andasy teo amin’ny lapan’ny faritra Atsinanana ireo delegasionina notarihan’ny lehiben’ny gouveremanta KOLO Roge. Tsy nihambahamba ny solombavambahoakan’ny Madagasikara voafidy teto Toamasina Atoa FAMINDRA Justin nagataka ny fanavaozana ny fomba fisainana amin’ny fitantanana ao Barikadimy. Nilaza mantsy izy fa misy ny kolikoly sy fivarotana naoty eo anivony oniversite ka ilana fanadiovana koa ny toe-tsaina eo amin’ny sehatry ny fitantanana.
Araka izany dia nanao antso avo Atoa KOLO Roger, lehiben’ny Governemanta Malagasy, mba hanomezan’ny rehetra tanana amin’ny fanjakana mba ho fanatsarana ny anjerimanontolo ny Barikadimy; eo ihany koa ny fanomezan-toky nataony amin’ny fanampiana ny oniversiten’ny Toamasina mba ho vita ny fanadiovana mialohan’ny volana janoary, izay fotoana hiverenan’ireo mpianatra hianatra indray.
Nosokafina tamin’ny fomba ofisialy ny Championnat National ASOIMI ny andron’ny alakamisy faha 25 septambra ihany, tokony tamin’ny 11 ora atoandro teo eo. Izay natrehin’ny Praiminisitra lehiben’ny gouvernemanta sy ireo minisitra 5 mianadahy toy ny minisitry ny kolotsaina, minisrtrin’ny rano, minisrtrin’ny tanora sy ny fanatanjahantena, minisrtrin’ny varotra sy ny fanjifana,ary ny minisitry ny fampianararana ara-teknika.
Tonga nanome voninahitra izany ihany koa ny lehiben’ny faritra atsinanana AtoaTALATA Michel sy ny lehiben’ny district Toamasina I,II ary ny solontenan’ny filohan’ny delegasionina manokana ny tananan’ny Toamasina.
Fantatra ary fa efa andihany faha 4 izao natao teto Toamasina izao ka ahitana mpandray anjara 4000 avy amin’ireo mpiasampanjakana manerana ny nosy.
(81) Prud'Homme RAKOTOSON : 28-09-2014 - 09:10